पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाकाे बैठक आज बस्दै, के-के छन् कार्यसूची ? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEW MAIPOKHARI NEWS पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाकाे बैठक आज बस्दै, के-के छन् कार्यसूची ?
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाकाे बैठक आज बस्दै, के-के छन् कार्यसूची ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । अदालतको आदेशअनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (साउन ३ गते) अपराह्न ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकका लागि संसद सचिवालयले कार्यसूची तोकेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुनस्र्थापित संसद् धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेको बताउँदै यसका लागि दलहरुबीच एकता हुनु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
आजको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने र राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्रहरुको व्यहोरा पनि पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
यसैगरी सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम १ बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत छ ।
साथै आजको बैठकमा यस अवधिमा निधन भएका विभिन्न सांसद पूर्वसांसदहरुको शोक प्रस्ताव समेत पेस गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ ।
आजै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन समेत बोलाइएको छ । दुवै सदनका अधिवेशन अपराह्न ४ बजे सुरु हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा पनि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने लगायत कार्यसूची रहेका छन् ।